ဝါခေါင်မိုး: Happy BLOG Day!!!
Posted by မအိမ်သူ at 8:44 PM
Happy Blog Day ပါအမ.။
ဘလော့စာမျက်နှာပေါ်မှာ စိတ်ချမ်းသာ၊ ကိုယ်ကျန်းမာစွာနဲ့ အမနှစ်သက်မြတ်နိုးတဲ့ စာတွေနဲ့ပုံဖေါ်ခွင့်ရနိုင်ပါစေလို့ ဆုမွန်တောင်းပါတယ်။
Happy 3108 Day to you too, sis!
နောက်ကျတာဟာ လုံးဝမလာတာနဲ့ စာရင်တော့ တော်သေးတယ်လို့လည်း ဆိုရိုးရှိသေးတော့ အခုလို နောက်ဆုံးပိတ်မှာ အိတ်နဲ့လွယ်တဲ့ ပို့စ်လေး ဖတ်ရတာ တကယ်ပဲ ဝမ်းသာပါတယ်၊း) မအိမ်သူက ဘလော့ဂ်မရေးခင် ကတည်းက ၂ နှစ်လောက်နီးပါး စာတွေ လည်ဖတ်ခဲ့လို့ ထင်ပါရဲ့..၊ သိတဲ့ဘလော့ဂ်တွေ တကယ့်ကို အများကြီးပဲ..၊ ဘလော့ဂ်တွေ အများကြီး ဖြစ်လာတာဟာ ပုံနှိပ်မီဒီယာနဲ့ ဝေးနေတဲ့ ကျနော်တို့လို လူတွေအတွက်တော့ ရွှေဥတွေ အများကြီး ဥပေးတဲ့ ငန်းအုပ်ကြီးကို တွေ့ထားသလို ပါပဲ၊ ကိုယ်ပိုင်ဘဝနဲ့ ဘလော့ဂ်ကြားမှာ ဟန်ချက်ညီညီ ထားရင်း ရှေ့လျှောက် စာတွေ ဆက်ရေး နိုင်ပါစေဗျာ...။
စာဖတ်အားကောင်းတဲ့ မအိမ်သူ စာတွေလည်း အများကြီးဖတ်နိုင်ပါစေနော်
ရှေ့ဆက်ပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင် စာတွေရေးနိုင်ပါစေ
ခမာတွေအကြောင်းနဲ့ ဟင်းကောင်းကောင်းလေးတွေအကြောင်းလည်း တင်ပါဦးလို့
Happy blog day ပါမမ :):)
လေးစားအားကျမိသွားပါတယ်။ကျနော်တို့လို Small Virus တွေကိုကျကျနနသွန်သင်ပေးပါလို့...။ (အတုယူလေးစားနေသူ..KMC)
HAPPY BLOG DAY!!!!!!sis......Go on.
September 01, 2011 5:03 AM
Happy Blog Day ပါ ညီမရေ
နှစ်ပေါင်းများစွာ ပျော်ရွှင်စွာနဲ့ စာတွေရေးနိုင်ဖတ်နိုင် ပါစေ
Happy Blog Day ပါအမရေ
စွာနဲ့အတူ စာပေများနဲ့ ဘ၀ကိုဖြတ်သန်းနိုင်ပါစေ။။
September 01, 2011 1:49 PM
ဘလော့ခ်ဒေးလေးတောင် ရက်ကျော်သွားပြီ.. ခုမှ လာဖြစ်တယ်.. အစ်မရေ..း)).. ပျော်ရွှင်ပါစေ...
အရင်တုန်းကလို ရေးဖြစ်ဖို့ ဆိုတာ အချိန်မအားလပ်မှုကြောင့် တကယ်ကို မလွယ်တော့ဘူး ထင်တယ် မအိမ်သူရေ။
ဒါပေမဲ့ အခုလို မှတ်မှတ်ရရ ရှိသူတွေကို တွေ့ရတော့ ပြန်လည်လန်းဆန်းပြီး အားတတ်မိပါတယ်။
ထပ်ဆင့်ပေးတဲ့ ဘလော့လင့်လေးတွေ အတွက် ကျေးဇူးပါ။
September 01, 2011 6:55 PM
မအိမ်သူက ကျွန်တော့်ထက်ကို အွန်လိုင်းမှာ စာတွေပိုဖတ်တာကိုး...ကျွန်တော်တော့ offline က စာအုပ်တွေ တပုံတပင်ဖြစ်နေတာနဲ့တင် အွန်လိုင်းမှာ တစ်ခါတစ်ခါ စာဖတ်အားနည်းတယ်...ဒီဘက်ရောက်ပြန်တော့ အွန်လိုင်းမှာ စာဖတ်များလာပြန်တော့လည်း ၀ယ်ထား သိမ်းထားတဲ့ စာအုပ်တွေကို အားနာရလောက်အောင် ဖြစ်နေပြန်ရောအစ်မရေ..ဒါပေမယ့် အီးဘွတ်တွေဖတ်ရတာ မျက်စိထိတာကြောင့် တစ်ခါတစ်လေတော့လည်းစိတ်ညစ်တယ်...kindle လေးတစ်ခုလောက် ၀ယ်ချင်ပေမယ့်လည်း ဖွတ်ကလိဒင်္ဂါးကို ခြွေတာနေရတာနဲ့ အဲဒီဘက်လည်း မလှည့်နိုင်သေးပါဘူးဗျာ...တစ်ခါတစ်ခါများ အလုပ်တစ်ဖက် ဖတ်စရာ စာတွေ တစ်ပုံတစ်ပင်နဲ့ ဆိုတော့ တစ်ရက်ကို ၂၄ နာရီက နည်းတယ်ထောင် ထင်မိသေးတယ်...အစစ အဆင်ပြေပါစေ အစ်မရေ...
ဘလော့ဂါအများကြီးကို မိတ်ဆက်ပေးထားတာပဲ နော်။ ဘလော့ဒေးအမှတ်တရ ပိုစ်အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်..
September 01, 2011 9:26 PM
အစ်မရေ ဘလော့ဒေးအတွက် အမှတ်တရဖြစ်စေတဲ့ ပို့စ်လေးဖတ်သွားပါတယ်။ သတိတရ လေး ရှိနေလို့ ကျေးဇူးပါနော်။
September 01, 2011 9:28 PM
ပြောသလိုပဲ နောက်ကျတာက လုံးဝမရောက်တာထက်
တော့တော်ပါသေးရဲ့နော်...:))) 3108 ဘလော့ဒေးမှသည်
ဟဟား ကျနော့်ကို မှတ်မိနေတာ အဲ့ပို့လေးနဲ့ပေါ့လေ ရှက်ထှာာား))
အမှတ်တရလေး ရှိနေတာပဲ ကျေးဇူးဗျ ကျနော်လည်း အစ်မ နာမည်ကို ဆီပုံးလေးမှာတွေ့ကတည်းက ထူးထူးခြားခြားလေးမှတ်မနေတာ ဘာကြောင့် လဲဆိုတာ သိချင်ရင်တော့ ပြောပြမယ် နောက်တော့း:P
ကျနော်လည်း စာဖတ်သူ ဘဝကနေ ဘလော့လောကထဲ ရောက်လာတာပါပဲ။
ကိုနဗနနဲ့ ကိုမင်းဒင် စာတွေ စစဖတ်ရတဲ့ ညမှာ တညလုံးထိုင်ဖတ်ပစ်တာ။ နောက်ထပ် ညတိုင်းလည်း အသစ်တင်လား ဝင်ဝင်ကြည့်တယ်။
အဲဒီလိုနဲ့ ဘလော့ဆိုတာကို ရင်းနှီးပြီး မထင်မှတ်တဲ့ အလှည့်အပြောင်းတခုမှာ ဘလော့ဂ်လေး လုပ်ဖြစ်ခဲ့တယ်။
ဒီလောကထဲ ရောက်လာတော့လည်း ခင်တွယ်ပြီး ဆက်နေဖြစ်တာ အခုထိပါပဲ။ ဆက်လက်ပြီး မအိမ်သူလည်း ပျော်ပျော်ရွှင် စာတွေရေးရင်း ဘလော့ဂင်းနိင်ပါစေ။
September 01, 2011 11:01 PM
သေသေချာချာ နှံ့နှံ့စပ်စပ်နဲ့ ဘလော့ဂ်အားလုံးကို ဖတ်ပြီး ရင်းနှီးနေတဲ့ အစ်မအိမ်သူပဲး)ရေးပေးတာ ကျေးဇူးနော်။
September 02, 2011 3:21 AM
အစ်မအိမ်သူ အမြဲပျော်ရွှင်စွာ စာတွေအစဉ်ရေးနိုင်ပါစေလို့...
ရေးလိုက်တာ စုံအောင်ပါသွားတာပဲဗျာ.... မအိမ်သူရေ... ကျနော်လည်း ဘလော့လေး လုပ်မိခဲ့တာ ကို ခုချိန်ထိ ဂုဏ်ယူနေပါတယ်ဗျာ။ နိုင်ငံတကာက မိတ်ဆွေတွေရတယ်။ နိုင်ငံတွင်းမှာ တနယ်စီမို့မဆုံနိုင်ကြပေမယ့် ဘလော့စာမျက်နှာမှာ လာဆုံမိကြာတာမို့အရမ်းကို ပီတိဖြစ်မိပါကြောင်းဗျာ
September 05, 2011 10:44 PM
နှိပ်စက်မလို့လာတာ သနားလို့ပြန်လှည့်သွားတယ်မှတ်ပါ ချစ်မမ .း)
September 07, 2011 7:34 AM
ဘလောဂ်မိတ်ဆွေသစ်တွေရဲ့ လင့်ခ်တွေတွက်ပါ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်...း)